LXDE: waa maxay sideese loogu dhejiyaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19? | Laga soo bilaabo Linux
Lxde waa iftiin iyo dhakhso Deegaanka Desktop, sida ugu badan XFCE y MATE. Daaran Lxde inta badan macluumaadka uma badna sida kuwa kale. Tusaale ahaan, noo qoraalkii ugu dambeeyay cadee ku saabsan Lxde, waxay ahayd in kabadan 1 sano kahor, sida loo sameeyo keyd.
Tani waxay xaqiiqdii ugu wacan tahay xaqiiqda ah inay badanaa yar yihiin Qaybinta GNU / Linux intaas waxaa ka mid ah sida Degaanka desktop-ka oo ah Default. Sidaa darteed, qoraalkan waxaan diiradda saari doonnaa gaar ahaan Maxay tahay? y Sidee u rakibtaa?. Adkeynaya, dabcan, hada DEBIAN GNU / metadistribution Linux, ee ugu dambeeyay version, ka lambarka 10, magaca summada Buster. Kaas oo sidoo kale hada aasaas u ah qaybinta MX-Linux 19 (Duckling xun).
Iyadoo la daliishanayo macluumaad rasmi ah, kuwa soo socda ayaa lagu muujin karaa:
"LXDE, maxay ka dhigan tahay Deegaanka Miisaanka Fudud ee X11, waa jawi deg deg ah oo miisaan fudud oo desktop ah. Waxaa loogu talagalay inay ahaato mid saaxiibtinimo leh oo khafiif ah iyadoo la ilaalinayo isticmaalka ilaha. LXDE waxay isticmaashaa RAM yar iyo processor ka yar, iyadoo noqonaysa desktop muuqaal muuqaal leh. Si ka duwan kombuyuutarrada kale ee aadka isugu dhafan, LXDE waxay ku dadaaleysaa inay noqoto mid qaabeysan, sidaa darteed qayb kasta waxaa loo isticmaali karaa si madax-bannaan oo leh ku-tiirsanaan yar. Tani waxay ka dhigeysaa gudbinta LXDE qaybaha kala duwan iyo barnaamijyada mid fudud. ”. Rasmi LXDE Wiki
1 Dhammaan wixii ku saabsan LXDE
1.3.1 Isticmaalka amarka Tasksel adoo adeegsanaya Sawirka Isticmaalaha Sawirada (GUI)
1.3.4 Ficillo dheeri ah ama dheeri ah
Dhammaan wixii ku saabsan LXDE
Lxde la sii daayay qayb ahaan sanadka 2006 waxaa qoray saynis yahanka reer Taiwan Hong Jen Yeey Markii la dhammeeyay PCManFM, moduleka ugu horeeya desktop. Kadib desktop-ka oo buuxa Lxde, iyadoo ujeedadu tahay u adeegida horumarka tamar yar iyo qaybinta kheyraadka.
Waqtigan xaadirka ah waxaa loogu talagalay 0.8 version (xasilloon)
Lxde waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo keyd rasmi ah in badan GNU / Linux Distros, sida: DEBIAN, Ubuntu iyo Fedora. Qaarkoodna waxay ku keenaan si aan caadi ahayn markay diirada saaraan kooxaha adeegsiga ilaha yar.
El nidaamka deegaanka u dhashay Lxde Waxay ka kooban tahay barnaamijyo dhowr ah, kuwa soo socdaa waa kuwa ugu astaanta ama caan ah: PCManFM (Maamulaha faylka), Buug-yaraha (Tifatiraha qoraalka), GPicView (Sawirka Sawirka), iyo kuwo kale oo badan.
Lxde ayaa lagu sameeyay GTK + 2. Laakiin waxay leedahay horumar is barbar socda oo la yiraahdo LXQT, oo aan kaga hadli doono qoraal kale.
Nota: LXQT waa Deegaanka Desktop hadda waxaa fuliyay Hong Jen Yeey iyo bulshadeeda Horumarineed, laakiin kama tagin horumarka Lxdemaadaama ay isku dayayaan inay u soo rartaan GTK + 3 la jaanqaadida Deegaanka Gnome3. Sidaa darteed, sida ay u wataan LXQT oo leh QT5 iyo KDE Frameworks 5 si loo gaaro waafaqsanaanta leh Deegaanka KDE Plasma.
Waa deegaan loo yaqaan 'Desktop Environment' isticmaal deg deg ah iyo mid hooseeya. Awooddiisu waxay ku jirtaa in loo qaabeeyo inay ahaato qafiif ah, isticmaal processor ka yar iyo RAM ka badan kuwa kale, oo ka faa'iideysta isticmaalkeeda qalabka waxqabadka hooseeya.
Waxaa ilaaliya a bulshada horumarinta caalamiga ah oo hadda ka shaqeynaya sidii loo ilaalin lahaa xasilloonida iyo ansaxnimada Deegaanka iyadoo la gaarayo u soo guuritaankeeda suurtagalka ah GTK + 3.
Wuxuu la yimaadaa a interface indhaha qabanaya laakiin leh astaamo dhaqameed.
Waxay leedahay dhinacyo togan sida taageero luqado badan, abuurista hoteelada caadiga ah iyo shaqooyinka dheeraadka ah sida faylasha la hubiyey.
Hadda Lxde waxaa taageeraya Linux. In kasta oo waliba la tijaabiyey FreeBSD. Marka asal ahaan waxaa taageera nidaam kasta oo ku saleysan Unix.
Kuma xirna wax desktop ah, taasi waa, qeybaheeda waxaa loo isticmaali karaa si ka madax banaan Deegaanka Desktop laftiisa Lxde.
Naqshadeedu waa lagu hagaajiyay heerarka ka soo baxaya libeesktop.org.
Ma laha maamul daaqad u gaar ah, laakiin waxaa badanaa loo isticmaalaa badanaa Furo furan.
Saldhigeedu wali waa ku jiraa GTK2 laakiin waxay leedahay nooc tijaabo ah Lxde ku saleysan GTK + 3, oo lagu abuuray taageerada kooxda isticmaalaha halka (lxde-gtk3).
Waxay ku jirtaa horumar buuxa oo aanu gaadhin taada nooca ugu horreeya ee qaangaarka ah (1.0) laakiin beeshiisa ayaa maalin walba u koraysa faa iidooyinka ugu waaweyn oo aad u deggan.
Waa lagu talinayaa loogu talagalay isticmaaleyaasha leh khibrad ka sareysa tan caadiga ah, maadaama wax waliba aysan sidaa ugu dhowayn, oo la tuujiyo awooddeeda waxay u baahan tahay a amarka wanaagsan ee Linux.
para wax dheeri ah baro waad booqan kartaa website-ka rasmiga ah iyo tan abuureheeda Distro:
Websaydhka rasmiga ah ee mashruuca LXDE
Halka aad ka heli karto qaybaha rasmiga ah ee rasmiga ah, sida a Blog, Wiki iyo Forum, iyo kuwo kale oo badan. Xiriirimaha soo socda ayaa sidoo kale la heli karaa si loogu kabo macluumaadka Lxde:
Arch Wiki oo ku taal MATE
Wikipedia wiki on LXDE
Isticmaalka amarka Tasksel adoo adeegsanaya Sawirka Isticmaalaha Sawirada (GUI)
Xullo Deegaanka Desktop LXDE iyo wixii kale ee koronto ama baakado dheeri ah.
Nota: Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa a Desktop Environment ku saleysan LXDE fudud iyadoo la beddelayo xirmada lxde by lxde-core.
Dib u bilow oo soo gal adoo dooranaya Deegaanka Desktop Lxde, haddii ay dhacdo inaad haysato wax ka badan hal Deegaanka Desktop rakibay oo aanad dooran Maareeyaha Soo-gal ldxe-session.
Xusuusnowna, kani waa kan booska shanaad taxane ah oo ku saabsan Goobaha GNU / Linux Desktop. Kuwii hore waxay ku saabsanaayeen GNOME, KDE Plasma, XFCE, Qoraxda y MATE. Halka kan ugu dambeeya uu ku saabsan yahay LXQT.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Entorno de Escritorio» lagu yaqaan magaca «LXDE», taas oo loo arko inay tahay midda ugu fudud uguna fudud, sida oo kale XFCE, oo leh qaab dhaqameed iyo wax yar oo nuqul ah oo codsiyada asaliga ah, adduunka dhexdiisa «Distribuciones GNU/Linux», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » LXDE: waa maxay sideese loogu dhejiyaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19?
Waxaan hayaa Debian 10 oo leh LXDE iyo XFCE oo la rakibay, waxayna igu dhacdaa in nooca cusub ee xafiiska WPS Office 11.1.0.9080 uusan ka bilaabmin LXDE, laakiin haddii uu ku jiro XFCE, nuqulkii hore wuxuu ka shaqeeyay LXDE. Ma jiraa qof wax ka og dhibaatadan iyo sida loo xalliyo?